MacOS सियरा १०.१२. now अब सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ म म्याकबाट हुँ
MacOS सियरा १०.१२.। अब सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ
जोर्डी गिमेनेज | | MacOS सियरा
यस बुधवार दिउँसो कपर्टिनोका केटाहरूले अन्तिम विकल्पको अन्तिम संस्करण सुरू गर्नका लागि छनौट गरेका छन् macOS सिएरा 10.12.6, आईओएस, वाचोस र टिभीओएस। यस अवस्थामा, हामीलाई अब रूचि राख्ने कुरा म्याक प्रयोगकर्ताहरूको लागि संस्करण हो र यद्यपि यो सत्य हो कि यी संस्करणहरूमा अघिल्लो संस्करणको तुलनामा धेरै परिवर्तनहरू छैनन्, तेस्रो-पार्टी आक्रमणहरूको समस्याबाट बच्न अपडेट गर्नु आवश्यक छ, स्थिरता उपकरण र जस्तै सुधार गर्नुहोस्।
यस पटक हामी अघिल्लो संस्करणको सामना गरिरहेका छौं macOS हाई सिएरा र यो सत्य हो कि एप्पलले पछिल्लो १०.१२.। र म्याकोस उच्च सिएराको पहिलो बीच संस्करण जारी गर्न सक्दछ, परिवर्तनहरू न्यूनतम हुनेछन्।
नयाँ संस्करण थप गर्दछ बग फिक्सहरू, प्रणाली स्थिरता सुधारहरू, र बग फिक्सहरू पछिल्ला संस्करणहरूमा फेला पर्‍यो। यो नयाँ अद्यावधिक स्थापना गर्नमा हिचकिचाउँनुहोस् जति सक्दो चाँडो तपाईं यो तरीकाले हामी लागू गरिएको सुधारको फाइदा लिनेछौं। जस्तो कि हामी भन्छौं अपरेशन वा उत्कृष्ट खबरको स्तरमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन्, तर म्याकलाई अपडेट राख्नु सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एप्पलसँग हाल विभिन्न अपरेटि systems सिस्टममा खुला छ र कुनै पनी यस वर्ष सबैभन्दा ध्यान प्राप्त गरिरहेको एक आईप्याडका लागि आईओएस हो किनभने धेरै नयाँ सुविधाहरू यस उपकरणमा कपर्टिनो कम्पनीबाट केन्द्रित छन्।
हाम्रो म्याक अपडेट गर्न हामी केवल जानु पर्छ म्याक अनुप्रयोग स्टोर र ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् अद्यावधिकहरू, त्यस पछि हामीले डाउनलोड गर्नु र स्थापना गर्नु पर्ने नयाँ संस्करण देखा पर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक ओएस एक्स » MacOS सियरा » MacOS सियरा १०.१२.। अब सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ
जोस पेरेज भन्यो
मसँग सिएरा १०.१२. with को साथ म्याकबुक प्रो छ, तर १०.१२. to मा अपडेट गर्ने प्रयास गर्दा कम्प्युटर स्याउ संग स्थिर भयो र फेरि सुरु गर्न मैले ब्याकअप तान्नु पर्छ।
होसे पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, कसैले हामीलाई यसमा मद्दत गर्न सक्छ?
सबैलाई नमस्कार!। म मेरो स्नायुमा छु मसँग टाइम मेशिनको साथ कहिले पनि समस्या आएको छैन, तर १०.१२.ier देखि १०.१२..10.12.5 मा म्याकोस सिएराबाट जम्पि गर्दा मेरो म्याक ब्याकअप हुँदैन। यो सदाका लागि जान्छ र त्यसपछि "टाइम मेशिनले जगेडा पूरा गर्न सकेन" सन्देश। के अरु कसैले याद गर्यो? म तपाईको टिप्पणीहरु लाई कदर गर्छु।
यही कुरा मलाई २ म्याकबुक प्रोमा २०१2बाट र एक २०१२ बाट भयो। तर समय मेशीनको साथ पनि मैले यसलाई पुनः प्राप्त गरिन। एउटा मैले सफाई स्थापना गर्नुपर्‍यो र सब भन्दा पुरानोले मलाई हार्ड डिस्क फर्म्याट गर्न पनि अनुमति दिदैन। यो अपडेट भाइरस भन्दा खराब छ। यो अधिक र विन्डोज जस्तै देखिन्छ।
मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ । सफल रिकभरी पछि (मलाई अझै थाहा छैन कि मैले यो निराशाबाट कसरी गरेको छु) म यसलाई 12.13 सम्म अद्यावधिक नगरी छोड्छु।
शर्मको जीनियस बारमा सम्झौता। जस्तो कि म समस्या बनाइरहेको छु। साँच्चै यसले एक चिन्ह लोड गर्न सक्छ।
एस्टेबान एम। भन्यो
मसँग उही समस्या छ, म मेरो कम्प्युटर सुरु गर्न सक्दिन ... यो एप्पल र लोडिंग बारको साथ कालो स्क्रिनमा अड्किएको छ, यो नयाँ अपडेट वास्तविक आपदामा परिणत भएको छ !!!! मलाई थाहा छैन म के गरु…
Esteban M लाई जवाफ दिँदै
नमस्ते, शुभ दिउँसो, मसँग म्याकबुक एयर (2015) छ, मैले 10.12.6 मा अपडेट गरें र मलाई ब्याट्रीमा समस्या हुन थालेको छ जुन यो निष्क्रिय हुँदा मलाई चाँडै निस्कन्छ।
उनलाई पनि केही त्यस्तै भयो ।
ठीक त्यस्तै चीज मलाई भयो र मैले मेरो टाइममाइनको ब्याकअपको साथ यसलाई ठीक गर्नुपर्‍यो
मसँग एक हावा २०११ छ र मैले १०.१२. with को साथ राम्रो गरिरहेको छु ... मेरो धन्यवाद र मेरो पीसी २०१ game खेल भन्दा हजार गुणा छिटो
Jcc लाई जवाफ दिनुहोस्
UPSS, मैले यो अपडेट गरेको छु र अहिलेसम्म समस्याहरू बिना।
नमस्कार, मसँग २०१ 2015 मा म्याकबुक एयर छ र मैले अपडेट गरे पछि अडियोले काम गर्न छाड्यो। मलाई यो कसरी ठीक गर्ने थाहा छैन।
प्रिय, मलाई अलिकति समस्या छ ... लगभग अव्यावहारिक;
यस्तो देखिन्छ कि जब फोटोशप सीसीबाट फाईलहरू ब्राउज गर्दै र पप-अप विन्डोमा नेभिगेट गर्दा मलाई लाग्छ कि मेरो कर्सर फाइलमा "अड्किएको" छ। मैले यसलाई छोड्नको लागि यस फोल्डरको खाली क्षेत्र चयन गर्नुपर्दछ, र यसैले यसलाई सार्नको लागि मैले हेर्न चाहेको अर्को फाईल चयन गर्नुहोस्। (अहिले सम्म यसलाई खोले बिना)। म्याक ओएस सिएराको अघिल्लो संस्करणहरूसँग मलाई के भएको थिएन भन्ने कुरा।
मेरो हालको संस्करण म्याकबुक प्रो लेट २०१२ मा १०.१२.। छ।
मलाई आशा छ कि तपाईंले मलाई बुझ्नुहुनेछ र मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ ... अग्रिम धन्यवाद!
हेरोल्ड टोरेस भन्यो
मलाई पनि त्यस्तै भयो, म्याकोस सियराको पछिल्लो संस्करणमा अपडेट गर्दछु र पीसी क्र्यासमा लोडिंग बारको साथ अगाडि न बढ्ने। मैले पीसीलाई समय मेशीनको साथ रिकभर गर्नुपर्‍यो
हार्ल्ड टोरेसलाई जवाफ दिनुहोस्
जाभी जी भन्यो
यो एक मजाक हो, दिनहरू बिते पछि मलाई नयाँ संस्करणमा अपडेट गर्न सोध्नुहोस्, प्रणाली सुरु हुँदैन। म एप्पल कल गर्छु मलाई कुन चरणहरू अनुसरण गर्न भनेर बताउनुहोस् कि २०१२ देखि मेरो MBP i7 पुरानो हो र यससँग टेक्निकल सेवा छैन, कि म यो अपडेट स्थापना गर्दिन। एक अविश्वसनीय जवाफ। अन्तमा मैले यसलाई पुनःप्राप्त गर्न समय मेसिन तान्नु पर्‍यो किनभने न त PRAM रिसेट गर्दै छ, टर्मिनलबाट सबै .text फाइलहरू मेटाउँदै वा कुनै पनि कुरा। प्रत्येक चोटि उनीहरू बढि निराश हुन्छन्
Xavi G लाई जवाफ दिनुहोस्
वाचओएस 3.2.3.२..10.2.2 र टिभीओएस १०.२.२ डाउनलोडका लागि पनि उपलब्ध छन्
इसाबेल गे माहेल एप्पलमा चीनको प्रमुख बन्छन्